Siyaasiga cabdiraxman cabdishakuur oo Dowlada Farmaajo la Heshiiyey – Marqaanmedia24.com
Siyaasiga cabdiraxman cabdishakuur oo Dowlada Farmaajo la Heshiiyey
April 15, 2018 maqal iyo muuqaal, wararka 9
“AMAR DAWLO MUDEEC, NINKA DIIDA DABBAAL” baan maqli jiray kollay. Ninkani dawladda la ma uusan heshiinin ee waa uu u hoggaansamay ka dib markii miyirka loo toosiyay ee waxa uu yahay la dareensiiyay.
TOE THE LINE OR YOU ARE TOAST, SIMPLE AS.
Waraabo marabiyo ma noqdo, waxaa kaloo jirta ninkii abeeso hoosta gashta asagaaka shalayndoono, Cabdiraxmaan Cabdishakuur qudbooyinkiiisii waa duubanyihiin siyaasina ma aha qofkuu siyaasi u noqdo asagaa cirka roobka ku og. Hadaladii qabiilqabiilka ahaa waa duubanyihiin. Sidaas darteed Oday Basbaas waa runtiis Waa u hogaansamay laakiin nin qaad qaad bartay gavantiisa ma celinkaro waa nin uu ka uraayo Qabiilku
Nin weyn oo aqoon isku huba walee inaanad sidiisii u hadlin. Toe the line or you are toast is Afweyne’s mantra.
Aad iyo aad ayaan uga xumahay in dhaqan aad mooryaanimo ku tilmaantaan nin ay dawlad dhami kula kacday aad adna u riyaaqdo. Taasi waxa ay aad iyo aad u cabireysaa halka aad xaqiiqadii taagantahay. Yacni munaafaqnimo waxa aad ka cabataa cadaalad daro. Kii cadaalad daradaas lagu sameeyay ee weliba in qudha laga jaro loogu talo galayna waad ku raacsantahay.
Walaahi fashil ayaad tahay. Si kasta ood harag idaad u gashato yeymadaada waxa laga gartaa miciyaha aad banaanka usoo bixiso markaad aragto dhiiga cadawgaaga oo la daadiyay.
Axmed dhakhtar aad ninka fikirkiisa kahadley maxaad uhabareysa marna ucalacaleysa mise dumar badan ayaadlasoo jirtay gah gah gah gah
Jirtay=kortay ayaan ula jeedaa
@ Mudane Kamaal Adan,
Afkaaga caano lagu qabay ina adeer! Waxgaradka adiga oo kale ee akhyaarta ah ayaynu mar kasta u baahannahay in ay waxmagaratada runta u sheegaan oo ay maanka qaldan ka saxaan.
Allaah Ya Cizzak!
Kolay munaafaqadaada maalinba inbaa soobaxaysa kolay laangaab cuqdadeysan ayaad tahay kolay dowlad somaliyeed taageeri maysid farmaajo ayaad qabyaalad kutaageeraysaa isna waa marti wax uu kuuqaban karano majirto hadaad aargudasho kasugaysay ninkaan aad kadaba mashxaradayso c/shakuur in dulmi loogaystay wixii diin leh waa ogyihiin laakin nacas adoo kala bilaa caqli ah cuqdadeysan indhihiisu wax kalay arkaan calaa kuli xaal farmaajo waa inan layaal cidii kasugaysa inuu u aargudo
Waar dadkani damiir malaha. Xitaa qalbi dhagax oo ah daaroodkay KU dhintaan ayaa markii la dhiibay intay wadaninimo iyo dareen Soomaaliyeed geli lahaa ayay Farmaajo oo Mooge. Ah daba fadhiisteen.
Qudhaanjo goof hawiye ama geed Iidoor dhulkooda ku yaala KU nool haday xagtini. Soo gaadho farxad bay kala dilaacaan. Neceyb kuwan halkaas ayuu ka gaadhay.